UDkt Benedict Olalusi.Click here for English version
I-Cement & Concrete SA (i-CCSA), inhlangano edidiyele ewumholi kuzona zonke izinto ezithinta usimende nokhonkolo eNingizimu Afrika, imemezele uDkt Benedict Olalusi waseSikoleni Sobunjiniyela njengomcwaningi ovelele ezweni i-Young Concrete Researcher yowezi-2021.
Lomklomelo uwuthole kwisimpoziyamu ebesenkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe ye-Young Concrete Researchers, Engineers and Technologists’ YCRETS 2021 ye-CCSA ebiklomelisa abacwaningi abancane abavelele abaneqhaza elimqoka ekuthuthukiseni ubuchwepheshe bukakhonkolo besaqala emikhakheni yabo.
U-Olalusi, ongunjiniyela wezakhiwo uneziqu zobudokotela kwi-Civil Engineering zase-Stellenbosch University neMastazi i-M.Eng degree in Structural Engineering ne-B.Eng degree in Civil Engineering zase-Federal University of Technology in Akure eNigeria, uke waba phesheya e-Technical University (i-TU) of Dortmund eJalimane ngokohlelo i-2019 Gambrinus Fellowship ekubambisaneni kwezocwaningo nezemfundo.
Umsebenzi wocwaningo ka-Olalusi ugxile ekuthembekeni kwezakhiwo nokubheka ubungozi, ukuhlola amazinga ezokuphepha ekudwebeni izakhiwo, izindlela ezintsha zezinto zokwakha nokusebenzisa imishini efundeni nasekuhlanganiseni ulwazi lobunjiniyela kwezokhwakha. Useke waklonyeliswa ngoxhaxha lwemiklomelo ngomsebenzi wakhe wocwaningo ezikhungweni ezihlukene, waxhaswa yi-National Research Foundation (i-NRF) nezinye izikhungo.
U-Olalusi unamava emikhakhene ehlukene okubalwa kuyona ubunjiniyela kwezokwakha, ukuba ngumeluleki ngobungozi nokwenza izinhlelo zamakhompiyutha. Useke wabhala amaphepha ocwaningo amaningi, wahlanganyela nabanye ukubhala amanye ezingqungqutheleni ezinabanye abalingani bakhe nomeluleki wezitshudeni ezenza ucwaningo.
Emukela umklomelo we-CCSA, u-Olalusi uthe uthakase kakhulu ukunqoba umklomelo omkhulu kangaka ozomkhuthaza ukuthi aphokophele esicongweni emsebenzini wakhe wokucwaninga. ‘Ngikhuthazwe yizingwevu nabalingani bami, engibahlonipha kakhulu, engithola ukukhuthazeka kubona ukuthi ngenza kangcono kuzo zonke izigaba,’ kusho yena.
‘I-CCSA yethule lomklomelo ukuthi ube yingxenye yamasimpoziyamu e-YCRETS aklomelisa iqhaza labacwaningi abancane ukwandisa ulwazi endimeni kakhonkolo, ukusebenzisana nezimboni kwabo nokufafaza “isiko lezinga eliphezulu” kubacwaningi abancane,’ kusho uSolwazi u-Mike Otieno waseSikoleni seZokwakha neZemvelo e-University of the Witwatersrand, nongusihlalo wethimba labehluleli le-CCSA Young Concrete Researcher.
Amagama: ngu-Swastika Maney